Mamiriyoni gumi nematatu evaEurope vanosvika kuendesa Gulf kushanya kupora
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mamiriyoni gumi nematatu evaEurope vanosvika kuendesa Gulf kushanya kupora
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Bahrain Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kuwait Kuputsa Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Oman Kuputsa Nhau • vanhu • Qatar Kuputsa Nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UAE Kuputsa Nhau
13.3 mamirioni eEuropeanosvika kuendesa Gulf kushanya kudzoka.
Nyika dziri muGCC dzinosanganisira United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait neBahrain uye dzese dzinopa mhando dzakanaka dzesarudzo dzekubhururuka uye chigadzirwa chakasiyana chekushanya, icho chinokwezva vafambi vekuEurope.
Vafambi veEuropean vanozove mutyairi akakosha eGCC kumatunhu ekushanyirwa kubva ku COVID-19.
Mune 2019 pre-denda rakasvika kubva kuEurope kuenda kuGCC nyika dzakasvika mamirioni e11.8 vashanyi.
Vanouya mushure mekuputika vanofungidzirwa kuti vadzokere kuvashanyi vanosvika mamirioni gumi nemazana matatu nemakumi maviri nemakumi maviri nematanhatu, mukombero wegore wekukura (CAGR) we13.3%.
Vafambi veEuropean vakagadzirirwa kuve musika wakakosha sosi yeGulf dunhu, kunyanya Gulf Kubatana Kanzuru (GCC) nyika, dzinozobatsira yavo post denda revashanyi indasitiri kupora. Nyika dziri muGCC dzinosanganisira United Arab Emirates, Saudhi Arabhiya, Qatar, Oman, Kuwait neBahrain uye vese vanopa yakanaka nzira yekufamba nendege uye chakasiyana chigadzirwa chekushanya, icho chinokwezva vafambi vekuEurope.
Iyo yazvino indasitiri data inoratidza kuti mu2019 pre-denda vasvika kubva kuEurope kuenda kuGCC nyika dzakasvika mamirioni e11.8 vashanyi. Muna 2020, vanosvika vakadonhera pamamirioni 3.9 nekuda kwedenda, kuderera kwe67% gore-pamusoro-gore (YOY) kuderera, zvisinei, vanouya mushure mekuputika vanofungidzirwa kuti vadzokere kuvashanyi vanosvika mamirioni 13.3 na2024, mukomboni wegore rekukura (CAGR ye17.5%.
Tichifunga nezve yakakwira nhanho dzekukura dzinotarisirwa kubva kune vafambi vekuEurope vanosvika mukati GCC nyika mumakore matatu anotevera, ivo vachange vari mutyairi wedunhu rekudzoreredzwa kwekushanya kubva kuCOVID-19. Imwe nyika yakakosha kudunhu iUK sezvo fungidziro dzazvino dzeindasitiri dzinoratidza kuti vanosvika kuUK kune nyika dzeGCC vachasvika mamirioni matatu na3 neCAGR ye2024%.
UK vafambi vagara vachikwezvwa GCC nyika sezvo ivo vachipa akasiyana ezvakashambadziro chirevo chezhizha uye nguva yechando zuva, ine mahombekombe anoshamisa, maguta akapararira uye zviitiko zvekushanya. Hupfumi uye chinzvimbo cheDhailand chine mahotera emhando yepamusoro uye neruzivo rwekushamisira irwunopa runofarirwawo nevafambi vekuUK.
Nyika dziri mhiri kweGCC dzine zvakawanda zvekukwezva veEuropean, nemusanganiswa wezviitiko kubva pazororo remahombekombe egungwa kuenda kune yakasarudzika ruzivo rwunopihwa nematunhu tsika uye nhoroondo. Izvi zvinozoibatsira kuti iwane mukurumbira wayo nekukurumidza kupfuura idzo nzvimbo dzinongopa ruzivo rwekuzorora kweguta.